सुत्नुअघि कहिल्यै नगर्नुहोस् यी गल्तीहरु
स्वस्थ जीवन बाँच्नु हामी सबैको चाहना हुन्छ । कसरी हुनसक्छौं हामी स्वस्थ ? यो त्यति सजिलो सवाल होइन । तर केही सामान्य कुराहरुमा ध्यान दिएर पनि हामी स्वस्थ रहन सक्छौं । जस्तो, हामी कम्तीमा पनि सात/आठ घन्टा दैनिक सुन्नुपर्छ । ननिदाउँदा पाचन प्रणालीदेखि सुन्दरतासम्म प्रभावित हुन्छ । यसले मानसिक तथा शारीरिक ‘स्ट्रेस’ पनि बढ्छ । तर तपाईंलाई निद्रा पर्दैन भने सुत्नु अघि वा रातको नौ बजेपछि यी गल्तीहरु गर्नुहँदैन ।
बढी खानुहुँदैन :
सकेसम्म सुत्नुभन्दा केही घण्टा अगाडि नै खाना खाइसक्नु राम्रो हुन्छ । राति आठ बजेभन्दा अगाडि नै खाना खानु धेरै राम्रो हुन्छ । ढिलो खाँदा निन्द्रा नलाग्न सक्छ । यदि अबेला खाना खानुपर्यो भने सुप, सलाद खानुहोस्, तेलमा पकाइएको वा फ्राई गरिएको
खानेकुरा नखानुहोस् ।
हाम्रोमा सुत्नेबेलामा पढ्नु राम्रो मानिन्छ । अझै रातैभरी पढियो भनेर बहादुरी देखाउने चलन पनि छ । अझ रमाइला सामग्री मात्र होइन गम्भीर विषयमा पनि अध्ययन गर्ने बानी कतिपयमा हुन्छ । अनुसन्धानकर्ताका अनुसार राति सुत्नुअघि गम्भीर पुस्तक पढ्नुभन्दा सामान्य फिक्सन पढ्नु उचित हुन्छ ।
सुत्नु अघि चिया/कफी :
चिया कफीमा पाइने क्याफिनले सिधै निन्द्रामा असर पर्छ । विषयविज्ञहरुका अनुसार, साँझ खाना खाइसकेपछि कफी पिउने बानी राम्रो होइन । यसले कैयौँ घन्टासम्म निद्रा नलाग्न सक्छ । यदि यस्तो बानी छ भने जतिसक्दो छिटो छोड्नुपर्छ ।
खानापछिको फिल्म :
डिनरपछि टिभी र फिल्ममा झुण्डिनु हाम्रो सामान्य दिनचर्या हो । यसैगरी नयाँ पुस्ता पनि टिभी नहेरे पनि ल्यापटप खोलेर इन्टरनेट चलाउँछन् । यस्तो गर्नु कदापि ठीक हुनै सक्दैन । यसले आँखामा दबाब पार्छ र निद्रा हटाउँछ ।
परिवारसँग बहस या लडाइँ :
गम्भीर बहस बेलुका वा राति गर्नुहुँदैन भनिन्छ । साँझ खानापछि परिवारसँग बहस नगर्नु नै बेस हुन्छ । बरु परिवारसँग रमाइलो कुरा गर्नु राम्रो मानिन्छ । यसले निद्रामा पनि सहयोग गर्छ ।
फोन र इमेलमा ब्यस्तता :
साँझमा अधिकांश मानिस इमेल र फोनमा झुन्डिन्छन् । यसले मस्तिष्कलाई आराम पुग्दैन र निद्रा हराउँछ । यसर्थ सुत्नुअघि मेडिटेसन गर्नु उपयुक्त हुन्छ । यसले निदाउन मद्दत पुग्दछ ।
अध्ययन भन्छ- सम्भोगले पनि हुनसक्छ हृदयाघात
लौ सुन्नुहोस् लसुनको ‍औषधीय गुणहरु
बेफाइदा पनि छन् बेसारका, थाहा पाइराख्नुहोस्
के तपाईंलाई थाहा छ ७ दिनमै अनुहार चम्काउने घरेलु विधि
अमिलो पानी आउँछ ? घरमै हुने सामान्य उपचारबाट लिनुहोस
दिमागको शल्यक्रिया गर्दा किन दुख्दैन ? जानिराख्नुहोस् दिमागबारे केही रोचक तथ्य
बिस्तारै विष फैलाउँछन् यी ७ खानेकुराले
पिसाब सम्बन्धी यस्तो समस्या छ, ख्याल गर्नुहोस्
डण्डिफोरले सतायो, यसो गर्नुहोस्
यस्ता ७ मानिसले कहिल्यै नखानू अनार
शाकाहारी भएपछि फाइदै फाइदा
घुँडामा समस्या हुँदा के गर्ने ?
यी हुन् रातको बेला खान नहुने १० खानेकुरा
दैनिक एक गिलास जिरा पानी पिउँदा पाइन्छ यी चामत्कारिक फाइदा
केवल दुई दिनमा सफा गर्नुहोस् कलेजो
दैनिक एक पोटी लसुनको सेवनले पाइन्छ कल्पनै नगरेका यी फाइदा